Dhibaatooyinka Somaliland ee Dhinaca Caafimaadka iyo Badbaadada(Health and Safety). – hogaanka.org
Ugu horeyn waxaa aan tacsi u dirayaa ehelkii ay ka baxeyn dadkaa ku geeriyoodey shilkaa foosha xun ee ka dhacay wajaale Allah na waxaa uga baryayaa inuu u naxariisto dhamaantood aamin yaa Allah.
Waxyar hadaan ka idhahdo dhintan waxaa aan u arkaa sidan:
Caafimaadka iyo Badbaadada waa waajibka qofkasta in uu ilaaliyo balse dawlada ayaa masuul ka ah dejinta siyaasada caafimaadka iyo badabaada taas oo u baahan in hayad gaara oo aqoonteeda leh loo abuuro,lagu tababaro dhamaan shaqaalaha dawlada iyo kuwa gaarka u xoogsadaba loo dejiyo sharcigii lagu maamulilahaa lagula xisaabtamo cid walba.
Melaha ugu daran waxaa ka mida ee dayaacad weyni ka jirto dawladuna aaney waxba ka qaban :
1- Koronto gelinta magaalooyinka (urban electricity supply ) gurikasta ama xafiiskasta oo ay ku jirto caasimada hargeysa waxaa ka soojeeda xadhko danabeysan oo qaawan xitaa xafiisyada dawlada ee maamulka sare ayaad ka heleysaa , waxaa jira tiirar aan ku habooneyn in lagu xidho xadhkaha leydhka oo ay ku xidhan yihiin marka ay dabeyshu timaatana tirarkii oo dhulka daadsan baad arkeysaa oo halis ku ah dadka iyo hantidoodaba.
2. Dhismayaasha kala duwan ma arkeysid qof ka shaqeenaya dhismo oo gashan dharkii iyo qalabkii loogu talagaley in laga badbaado dhibaatada dhismaha ka dhalan karta , mana arkeysid hayad u xilsaaran oo ku kormeereysa ama aqoon teeda leh oo xitaa tabaro iyo wacyo gelin siineysa dadka xitaa ma jiro tabar kooban iyo wacyi gelin sida gargaarka degdega ah(First AID).
3- Wadooyinka oo xitaa lahayn hal calaamad oo digniin ah sida (Road signs), meelaha dadku ka talaabayo iwm, waxaad arkeysaa Cusbitaalada oo gaadhi hoonka ku yeedhinayo oo aaney jirin cid dan ka leh, dooxooyinka daadadku ka soo rogmadaan oo aan xitaa lahayn calaamadihii digniinta.
Caasimada Somaliland ee Hargeysa kama heli kareysid hal calaamadeed oo qofka baabur ku dhexwada u sheegeysa waxaa uu samenayo (no traffic signs).
Arimahan iyo kuwo kale oo badan waa dayacaado ay masuulka tahay dawlada somaliland ilaa intii lagu soo noqday dalka wax kamey qaban caafimaadka iyo badbaada sidaa darteed ayey maalin walba guri soo dumayaa,daadku qaadayaa gawaadhida laydhkuna qabsanayaa dadkii,hadii aan wax laga qaban dhibaatooyinkaa waxay noqondoonaan uu kuwo joogto ah oo weliba dhibaatooyinkoodu sii bataan akhristoow bal waxaad eegtaa uun hadii aad hargeysa ku nooshay :
a) Wadada ku hormartaa siday xorfada u tahay
b) guriga aad ku jirtaa xadhkaha leydhka ee soo galaa tiirarka ay ku xidhan yihiin qaradooda iyo tayadooda.
c) guri aad ku nooshay bal sida uu ugu adkeysan karo dabeelaha xoogan ama xitaa badqabkiisa .
arimahan oo dhami waa kuwo aad cidina dafiri karin magaaladuna wey koreysaa maalinba maalinta ka dambeysa.
Sidaa darteed waxaa loo bahan yahay sharcigii caafimaadka iyo badbaadada ee dalka.
Somaliya Jirtaa Ma jirtee Budhcad baa Xamar Iskugu tagtey Previous
Dhibaatada dhulboodka ee ka jirta Somaliland waxaa lagu qiyaasi karaa mid xadhka goosatey kol hadii sheekh Baladkii Galbeedka Somalilandba Ka hadlisay Saameynteedu Next